Umbhali? Iindlela ezi-7 ezinamandla zokwenza incwadi yakho ibe yiLizwe eliThengisa kakhulu | Martech Zone
Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba ungumbhali onqwenelayo emva kwexesha elithile lomsebenzi wakho kufuneka ubuze umbuzo, Uyenza njani incwadi yam ibe yeyona nto ithengisayo? kumshicileli okanye nawuphi na umbhali othengisa kakhulu. Kunene? Ewe, ukuba ngumbhali, ukuba ufuna ukuthengisa iincwadi zakho kwelona nani liphezulu labafundi kwaye uxatyiswe ngabo kuyavakala! Kucacile ukuba ukujika okunjalo kwikhondo lomsebenzi kuya kukuvumela ukuba wakhe igama lakho elingazange labonwa ngaphambili.
Ke, ukuba ufuna ukuba livakale ilizwi lakho emva koko kuya kufuneka uthathe amanyathelo afanelekileyo kunye nokukhethekileyo. Ngokuqinisekileyo ngekhe uguqule inoveli ibe ngumthengisi othengisa kakhulu ukuba ayibhalwanga kakuhle. Kodwa, ngaphandle kokujonga nje ubunyani bokubhala ngesitayile esihle, kuya kufuneka ukhathalele ezinye izinto ukwenza ukuba incwadi yakho ithengise kakhulu.
Ngaba ufuna ukwazi iimfihlo zokwenza njalo? Emva koko, Nazi iindlela ezintandathu onokuthi ukwazi ngazo ukwenza incwadi yakho ibe yeyona ntetho inkulu edolophini. Mane ufunde ngaphambili kwaye ndiyakholelwa ngokwenyani ukuba ezi ngcebiso ziya kukusebenzela!
Yiya kwinto okholelwa kuyo -Ukuba uphethe uluvo kwingqondo yakho ukuba isihloko esinokubhenela ngokwaneleyo kwisihlwele siyakwenza ukuba incwadi yakho ibe yeyona nto ithengiswayo emva koko uyaphazama. Endaweni yoko, bhala ngezi zihloko uzifumanayo zinomdla kwaye ufuna ukuzifunda ngokufanayo. Njengoko uCarol Shields watsho ngokuchanekileyo, 'Bhala incwadi ofuna ukuyifunda, leyo ungayifumaniyo'. Ke, nangona ubhala incwadi emnandi kwisitayile esiqhelekileyo ukuba ubhala ibali elibalulekileyo kuwe ke kunethuba elikhulu lokuba ibe yeyona nto ithengiswa kakhulu.
Khetha umxholo olungileyo -Enye yezona zinto zibalaseleyo ezinokuthi zivumele inoveli ukuba ihluke kwabanye ngumxholo wayo. Abafundi bakho banokucebisa incwadi yakho kwabanye kuphela xa benokunxibelelana ngokufanayo. Kwakhona, babhekisa incwadi emntwini xa befumanisa ukuba incwadi ihambisa umyalezo abanye ekufuneka bewufundile. Ke, kuya kufuneka utyale ixesha lakho elixabisekileyo kunye namandla okufumana umxholo olungileyo kwinoveli yakho.
Vumela ithoni ingathathi cala -Ukuba umxholo wakho wokwenza ukuba incwadi yakho ibonakale kwihlabathi liphela kuya kufuneka ubhale ngendlela enokunxibelelana nabo bonke abafundi. Kodwa linda! Ngale ngxelo yam, andithethi ukuba ibali lakho kufuneka lisekwe kwinkcubeko yehlabathi kuphela. Ungabhala kakuhle ibali malunga nento esondele entliziyweni yakho, njengesizwe sakho, inkcubeko okanye nantoni na! Qiniseka nje ukuba iingxoxo, ukubalisa, isimbo sokubhala njl. Ziyaqondakala ngabaphulaphuli abakhoyo kwihlabathi liphela. Uyalikhumbula iBhaso likaNcwadi eliPhumeleleyo lika-2015- Imbali emfutshane yokuBulawa kwesixhenxe? Ewe, ndithetha ngoluhlobo lwethoni.
Yila 'iKhava yeNcwadi' yakho ngokukodwa -Sinokukholelwa kwingxelo enje 'Sukuyigweba incwadi ngesembozo sayo' iminyaka. Kodwa, ngokwenyani, inkangeleko yangaphandle yencwadi ihlala ihambisa lonke ibali ngendlela elula ebhaliweyo ngaphakathi. Ke, ukunika incwadi yakho uhlobo oluthile lokujonga kujonge ukuba yinto ebaluleke kakhulu. Kodwa, sukucinga ukuba kufuneka ukhuphe isixa esikhulu semali ngokwenza oku! Konke okudingayo ngumyili oyilayo oyingcali ekwenzeni ukuba izimvo ziphile ngokweqweqwe lencwadi yeklasi.
Khetha umvakalisi ogqibeleleyo -Kaloku, xa isiza kuguqula incwadi ibe yeyona nto ithengiswayo, umvakalisi udlala enye yezona ndima zibalulekileyo. Ukunyaniseka kwegama lomshicileli omkhethileyo kuya kuchaphazela ukuthembeka kwencwadi yakho ngendlela enkulu. Ke, ungalibali ukukhetha umpapashi onokuthi avumele igrafu yentengiso yencwadi yakho iye phezulu !!
Yenza iphepha lombhali kunye neprofayile yencwadi kwi 'Goodreads' - Xa kuziwa kubathandi beencwadi emva koko i-Goodreads ligama elinengxolo !! Ke, ukuba ufuna ukuba iincwadi zakho zithengiswe kakuhle kuya kufuneka uyenze ibonakale kubaphulaphuli abakhoyo kwihlabathi liphela. Kwaye, i-Goodreads yeyona ndlela ilungileyo yokwenza njalo! Nje ukuba ugqibile ngokwenza iakhawunti kwi-'Goodreads ', cela abahlobo bakho, abalandeli kunye nabafundi ukuba bashiye uphononongo kwisiza kwaye okokugqibela kodwa ungancomeli kwabanye abasebenzisi bale webhusayithi.
Sebenzisa imidiya yoluntu ukubhengeza -Kule mihla, abantu bachitha ixesha labo elininzi besebenzisa i-intanethi kuthungelwano lweendaba ezinje nge-Facebook, i-Twitter, i-Instagram njlnjl., Ukuba ufuna ukushiya umbono wencwadi yakho emhlabeni sebenzisa la maqonga ukuthengisa incwadi yakho. eya kuphucula ulwazi lwakho nokwazisa. Ufuna ukwazi ukuba njani? Ewe, ilula kwaye kulula! Ukwenza iitrailer zeencwadi, ukwabelana ngeempendulo zencwadi, ukwenza imizobo yeencwadi ngokuqinisekileyo kuya kwenza imimangaliso kuwe.
Ngaphandle kwezi zibakala zikhankanywe ngasentla, kuya kufuneka ugcine ezinye izinto engqondweni yakho ukuba ufuna ukwenza incwadi yakho ibe yeyona nto ithengiswa kakhulu. Njengokuhlela, ukuhlela kunye nokuhlela kwakhona incwadi yakho amaxesha amaninzi, ukupapasha iinguqulelo nokuba newebhusayithi yombhali, ukuthumela ii-imeyile kubabhalisi bakho, ukubhala incwadi esisinyanzelo, njl njl kuya kukunceda ukuba ungabi nanto ngaphandle kokuthengisa kakhulu. Ke, musa ukulinda kwakhona! Thatha nje la macebiso, qhubeka, ubhale kwaye uthengise abathengisi bamazwe aphesheya kungekudala.
tags: umthengisi ogqibeleleumthengisi ogqibeleleincwadiubugcisa beencwadiincwadi igubungelaukukhuthazwa kwencwadiIincwadi zokufundaPublishingukunyuswa kwentlaloukubhala incwadi
I-Sanket Patel nguMsunguli kunye noMlawuli I-Blurbpoint Media, i-SEO, kunye nenkampani yokuthengisa yedijithali. Umnqweno wakhe wokunceda abantu kuyo yonke imiba yentengiso ekwi-Intanethi iqukuqela kugqatso lwemboni ayibonelelayo. Uyingcali kwintengiso yeWebhu, ukuSebenzisa iiNjini zoPhando, iMidiya yokuNxibelelana, ukuThengisa okuDibeneyo, ukuThengisa nge-B2B, Intengiso ekwi-Intanethi kaGoogle, Yahoo kunye neMSN.